के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? ९ वर्ष उपचार गर्दा निको नभएको रोग झाँक्रीले निको बनाएको भन्दै आइन् यि युवती, यसरी गरे झाँक्रीले उपचार (भिडियो हेर्नुस्) – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? ९ वर्ष उपचार गर्दा निको नभएको रोग झाँक्रीले निको बनाएको भन्दै आइन् यि युवती, यसरी गरे झाँक्रीले उपचार (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । तपाईलाई धामी झाँक्रीमा विश्वास लाग्छ ? अहिलेको २१ औं शताब्दिमा पनि धार्मी झाँक्री माथि विश्वास गर्नुलाई अन्धविश्वास भनिन्छ । तर विश्वास एउटा यस्तो चिज हो जहाँ बिरामीको ८० प्रतिशत रोग विश्वासले निको हुन्छ । एक युवती ९ वर्ष देखि विरामी थिइन् । उनले अनेक ठाउँमा उपचार गरिन् तर उनी निको भइनन् । तर एक जना झाँक्रीले ९ वर्ष देखि लागेको उनको रोग निको बनाएको दावी गरिएको छ ।
← उड्न लागेको विमानमा बँदेल ठो’क्किएपछि बिमान दुर्घटना, बँदेलका तीन पाठा म’रे, बिमान पनि प्वाल पर्यो → राती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जस्ले कल्पना पनि गरिनन् यस्तो होला भन्ने !